ac Contactor, အချိန်နှောင့်နှေး Block ကို, Thermal Overload Relay - XinHong
Zhe Jiang XinHong လျှပ်စစ် Xiangyang စက်မှုဇုန်မှာတည်ရှိပါတယ် Co. , Ltd.is, Liushi, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, တရုတ်။ Liushi နိမ့်ဗို့ယန္တရား inChina ၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ Xinhong ရှန်ဟိုင်း Kangji လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , နဲ့ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ် ,. Ltd နှင့်ရှန်ဟိုင်း Dikai လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , ,. သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နိုင်ရန်အတွက်, Ltd ။ .. OEM များအတွက်လူသိများတဲ့ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားကြီးမားသောနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏နံပါတ်နှင့်အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ရှန်ဟိုင်း Kangji လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , ,. Ltd နှင့်ရှန်ဟိုင်း Dikai လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ Co. , Ltd မှ Songjiang, ရှန်ဟိုင်းပြည်နယ်မှာတည်ရှိပြီးနေကြသည်။
CNC1-Z ကို DC ကစစ်ဆင်ရေး contactor 09 ~ 95A
CNC1-R ကိုစီးရီးအထူး forwater ဘွိုင်လာ 12 ~ 32R
CNC1-N နယူးဇီလန် interlocking contactor 09 ~ 95A
CNC1-K သည်စီးရီး contactor
CNC1-F, FN စီးရီး AC အ contactor 115 ~ 780A
RoHS Cert ဖြတ်သန်းအပေါ်နွေးဂုဏ်ပြုလွှာ ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးကွက်တွင်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအဘို့ငါတို့လိုအပ်ချက်များကိုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ interlocking ယန္တရားထုတ်ကုန်မကြာသေးမီကအောင်မြင်စွာ Delixi RoHS စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး, နှင့်စမ်းသပ်မှုလေပြီ ...
1, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအမျိုးအစားများအတွက် contactor, action ကိုဖွဲ့စည်းပုံတိုက်ရိုက်ရွေ့လျားမှုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, အဆက်အသွယ်အချက်နှစ်ဆချိုးအချက်ဖြစ်ပါသည်, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, အလင်းအလေးချိန်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, ရှည်လျား၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ...
အပူ relay ကို၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နိယာမအပူဒြပ်စင်သို့စီးဆင်းလက်ရှိကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အပူဖြစ်ပါသည်, ထို bimetal ဟာပုံပျက်သောကြောင့်တစ်ဦးက c ရောက်ရှိသောအခါ, ချဲ့ထွင်ပုံပျက်သောကွဲပြားခြားနားကိန်းရှိတယ် ...